युगसम्बाद साप्ताहिक - संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा
Monday, 04.06.2020, 02:44pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 02.20.2012, 03:37pm (GMT+5.5)
जतिसुकै क्रान्तिकारी, जतिसुकै लोकतान्त्रिक र जतिसुकै समानता, समावेशी, न्यायपूर्ण समाज, विधि अनि कानुनको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासनका नारा घन्काए पनि परिस्थिति त्यसको ठीक विपरीत छ । गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कुनै काम गरिएका र भएका छैनन् । एकसूत्रीय अभियानलाई नै नेताहरूले सफल पार्न नसकिरहेको बेला यतिखेर आएर मच्चिएका अनेक उत्पातलाई कसरी सामसुम पार्ने हुन् ? चिन्ताको विषय छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याई नयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा नेताहरू अग्रसर हुन्छन् भन्ने आम अपेक्षाको खिल्ली उडेको छ । यतिबेला मुलुक एकढिक्का त रहन्छ भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।
नयाँ संविधान बनाउने समय दिन प्रतिदिन गुज्रँदैछ । तीन महिना र केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि दलहरूले कार्यतत्परता र जिम्मेवारीबोध देखाउन सकिरहेका छैनन् । विगत चार वर्षदेखि एउटै रटानमा नेताहरू मस्त छन् । कहिले काम गरेजस्तो देखिन्छ, जनतामा केही आशा संचार हुन्छ तर पुनः स्थिति विग्रँदै जान्छ । जनतामा घोर निराशा छाउँछ तर राजनीतिक दलहरूले सो कुराको महसुस नै गरेका छैनन् । शान्ति र संविधानको पक्षमा हुनुपर्ने कामहरू द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका लागि एक्लाएक्लै नभएर सामूहिक छलफल गर्ने समय वितिसक्दा पनि दलहरूबीच आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दैमा फुर्सद छैन ।
दलका नेताहरूले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहका लागि गर्नुपर्ने त्याग र समर्पण पटक्कै देखाउन सकेनन् । नेताहरू मलमुत्र बाहेक केही पनि त्याग्न गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् । नेताहरूको लक्ष्य केवल सरकार बनाउने र गिराउने मात्रै हुन पुग्यो । अहिले पनि एकथरि सत्ता परिवर्तनको आकांक्षा राखिराखेको छ । वर्तमान सरकार रहनुपर्छ वा रहनुहुँदैन त्यो शान्ति र संविधानसंग सम्बन्धित नबन्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ दलकै एक पक्ष सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अडानमा छ । एमाले पनि सोही धारणामा अडिग देखिन्छ । यसको विपरीत नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म अर्को सरकारको कल्पना गर्न सकिन्न भन्दै बसिरहेको छ । अब सरकार गठन गर्ने पालो कांग्रेसको हो भनेर माओवादी र एमाले नेताहरूले भनिरहेका बेला सो अवस्था आएमा पार्टीभित्र पुनः कलह मच्चिने देखेर सभापति सुशील कोइराला सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई थाँती राख्नुभएको बुझ्न कठिन नभए पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी नेतृत्वकै सरकारले मात्र सक्ने यथार्थ पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो । माओवादीकै सरकार हुँदा त शान्ति प्रक्रियामा यतिविधि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्थामा अरुको सरकार गठन भयो भने त्यो काम सम्पन्न हुने गुञ्जायसै रहँदैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म चारवटा सरकार बन्यो । संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम दिएर त्यसको सिंगो संरचना सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको रडाकोमा होमियो । शान्ति र संविधान ओझेलमा पारियो । सत्ता स्वार्थले नेताहरू यतिबेला कुतीको बाटोबाट ल्हासा जाने सपना देखेको वटुवा जस्तै भौतारिइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने महान दायित्व लिएका नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर एकले अर्कोको तेजोबध गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । यो क्रम अन्तरपार्टी हुँदै पार्टीभित्रै पनि बढ्दो छ । दलहरूभित्रको वैमनस्य केही समयका लागि थन्किएको जस्तो देखिए पनि कुन बेला त्यो जागृत हुने हो पत्तो छैन । अहिले पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । दलहरूभित्र कुन नेताको वर्चश्व रहने भन्ने खेल जारी छ । एउटै दलभित्र चर्को विमतिले बास गरेको छ भने भिन्न–भिन्न दलहरूबीच सहमति हुन्छ भनेर पत्यार गर्ने आधार कसरी तयार हुन्छ ? शान्ति र संविधानको बाटो छाडेर सत्ता स्वार्थको बाटोबाट हिंडेका दलका नेताहरूले मुलुकलाई दुर्दान्त स्थितिमा पु¥याइछाड्ने शपथ नै खाए जस्तो देखिन्छ ।
आशाका किरणहरू उदाउँदै जानुको साटो निराशाका कालो बादल झन्भन् मडारिदै छ, जनताका आशामाथि तुषारापात भैरहेको छ । दलहरूको गलत क्रियाकलाप र स्वार्थको होलीले मुलुक दुर्दान्त नियतिको दिशातिर मात्र धकेलिंदो छ । अहिले जस्तो परिस्थितिको विकास भैरहेको छ यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरूबीच र दलहरूभित्र मडारिएको असहमति, असमझदारी र गुटबन्दीले मुलुकको भविष्यमाथि ठूलो प्रहार भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको कुरा कोरा राजनीतिक नारा मात्र बन्न पुगेको छ । सबैको मुखमा शान्ति र संविधान झुण्डिएको हुन्छ तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कोही अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण सकिए पनि समायोजन जस्तो जटिल विषय बाँकी नै छ । यसलाई विस्तारै पर धकेल्ने काम भैरहेको छ ।
बारम्बार सहमति र सहकार्यको ढ्वाङ फुक्ने नेताहरूले जुनरुपमा सहमति र सहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । समय अत्यन्त कम भए पनि आग्रह प्रवाहको क्रम टुटेको छैन । मञ्चहरूको भाषणमा अझै पनि एकले अर्कोलाई दोषारोण गर्न छाडिएको छैन । सबैको एउटै लक्ष्य– शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर जनमुखी संविधान जारी गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउन हुनुपर्ने भए पनि आ–आफ्ना पक्षको हितका लागि मात्र संघर्ष चर्काउने गरिएको छ ।
सत्तालाई मात्र एकमात्र लक्ष्य ठान्ने प्रवृत्ति सबैले देखाइरहेका छन् । जनताले शान्ति र संविधानको बिरुवा रोपेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्यसबाट स्वादिष्ट र पौष्टिक फल फलाउने जिम्मेवारी दिएका भए पनि नेताहरूले सो कार्य बिर्सिसकेका छन् । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने मुलुक र जनताले दिगो शान्ति स्थापना र जनमुखी संविधानको फल चाख्न पाउनु त कता हो कता त्यसको बोटै मरेको निरीह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त भएर परचक्रकीको दास बन्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जागृत छ । मुलुक खण्डित गर्ने नाराहरू यसबीचमा घन्किन थालेका छन् । त्यस्ता राष्ट्रघातीहरू सरकारमै बसेका छन्, जनप्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय थलो संविधानसभा–संसद्मा बसेका छन् । यस्ताहरूबाट मुलुकले सहज निकास पाउँछ भनेर कल्पना गर्नु अब व्यर्थ भएको छ ।
मुलुकको एकमात्र गन्तव्य शान्ति प्रक्रियालाई निकर्षमा पु¥याएर जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने हो र यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । तर सहमतिका नाममा आ–आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएका छैनन् । संविधानले निर्धारण गरेको दुई वर्ष र पटकपटक थपिएको एक वर्ष ६ महिना आपसी विवादमै सकियो । पछिल्लोपटक अन्तिम पटकका लागि भनेर ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिए पनि यसको आधा समय बितिसक्यो । संविधानसभाको म्याद करिब ३ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा नेताहरूले केही गर्छन् कि भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन तापनि २०६९ जेठ १४ गतेसम्म मात्र कानुनतः कायम रहने संविधानसभाले जनताले चाहेजस्तो राष्ट्र बचाउने, जगाउने र माथि उकास्ने किसिमको संविधान आउँछ भनेर पत्याउने आधार छैन ।
मुलुक दिन प्रतिदिन दलदलमा भासिदै जान थालेको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थको एजेण्डामै अल्झिरहेका छन् । मुलुकको अवस्था कस्तो छ ? सत्ता संचालनका सहयात्री बाहेक अरु सबैबाट निराश उत्तर आउँछ । सरकारको काम कारबाही र जनअपेक्षाबीच कुनै तालमेल छैन । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र संविधान निर्माणको कुरा आकाशको फल हुन लागेको छ । जनता अपराधीको निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति बढ्दो छ । समग्रमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अहिले मात्र होइन जनआन्दोलन–२ को सफलतापछिबाटै कमजोर हुँदै गएको यथार्थ कोहीबाट पनि लुकेको छैन । अति राजनीतिक महत्वकांक्षाले अपराध गर्नेहरूको संरक्षण गरेका दलका नेताहरू अहिले आफैं त्यसको फन्दामा पर्ने स्थिति सिर्जना हुन लागेको छ । यी सब अनर्थहरू दलका केही नेताहरूको स्वार्थले गर्दा मात्र भैरहेको छ । कसलाई कुन कुरा बोल्दा र गर्दा तत्काललाई फाइदा हुन्छ त्यही मात्र बोल्ने र गर्ने गरेका छन् ।
अहिले नेताहरूले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको कडा परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर जनताको हृदयमा बास बस्नुपर्ने समय हो । जनताको हृदयमा बस्ने यो अवसरलाई ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने हो । तर जनताको नाममा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न मात्र लागिपरे । हिजो प्रजातन्त्रकालमा जे जस्ता प्रवृत्तिहरूको विकास भएको थियो अहिले पनि त्यही छ । त्यसकारण मुलुकले अशल नेतृत्वको खोजि गरिरहेको छ । तर त्यस्तो नेतृत्व दिनसक्ने नेता अहिलेसम्म कोही भेटिएको छैन । जति भेटिएका छन् सबै लोभी, स्वार्थी र क्षुद्र स्वभावका मात्र देखिए । तैपनि जनताका लागि विकल्प छैन । यही विकल्परहित अवस्थाले गर्दा नै नेताहरूमा मात चढेको हो । नेताहरूले आफ्ना कमी, कमजोरी र दोषपूर्ण कार्यलाई सच्याउने जमर्को गर्ने हो भने मुलुकका समस्या छुमन्तर नै भएर हराउने छन् ।
लोकतन्त्रको नाममा नांगो नाच चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा जनतालाई विश्वासमा लिनुको साटो विदेशीको विश्वास र आशीर्वाद लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जनताले विश्वास गरेमा राजनीतिक व्यक्तित्व जीवित रहन्छ र कुर्सी बारम्बार प्राप्त हुन्छ भन्ने सामान्य चेत समेत नभएका नेताहरूले जनतालाई हिजो र आजका बीचमा भएको परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । मुलुकको बागडोर हातमा लिएकाहरू दिशा भ्रम, नीति भ्रम र मति भ्रमको शिकार हुँदै गैरहेको अवस्थामा यो पुस्ताको राजनीतिक नेताहरूबाट गल्ती स्वीकार हुने र मुलुकलाई सहज गतिमा अघि बढाउने क्षमता प्रदर्शन गर्लान् भन्ने झिनो आशा समेत कायम रहेको छैन । त्यसै भएर नेताहरू आफ्नो बोली, व्यवहार र काम नै सबैले मान्नुपर्छ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनमतको कुनै कदर छैन ।
सत्ताका लागि जसरी मरिहत्ते गरेर पार्टीभित्रै रडाको मच्चिएको छ त्यस्ता नेताहरूको चरित्र लोकतान्त्रिक मानिंदैन । जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार सही नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र नेता हुन योग्य मानिन्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा जोसुकै पनि स्थापित र विस्थापित हुनसक्ने सामान्य सिद्धान्तलाई चटक्कै बिर्सेर नेताहरूले जसरी जनतालाई हिजो र आजको अन्तर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदिएका छन् त्यसलाई जति ढाकछोप गरे पनि छोपिने छैन ।
जनताले राहत पाउने आशा नै गर्न छाडिसके । ‘संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ’ भनेर सजिलै पन्छाउने नेतृत्वकर्ताहरूले संक्रमणकाल छोट्याउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ । दलका नेताहरू आफ्नै पार्टीलाई त एकढिक्का राख्न नसक्ने हैसियतका छन् भने उनीहरूले मुलुक अखण्डित राख्न सक्छन् भनेर भन्नसकिने स्थिति अहिलेको गतिविधिले देखाएको छैन । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा २३ वटा दल थिए अहिले फुटेर ३३ वटा पुगिसक्यो । के यो मुलुकलाई बलियो बनाउनका लागि भएको क्रियाकलाप हो ? पक्कै होइन । मुलुकलाई सपार्न फुटेर होइन जुटेर मात्र सकिन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको अनुभूति सीमित नेताहरूले बाहेक सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएका छैनन् । आफूलाई ठूला लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउनेहरूको अप्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कारकै कारण मुलुकले अहिलेको नियती भोग्नु परेको हो ।